Kaliya Dance | Martech Zone
Isniin, February 1, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaa jira heesta Lady Ga-ga oo halkaa ka jirtay ilaa hal sano oo hadda la yiraahdo Just Dance. Madaxa kama bixi karo. Ma ahi taageere weyn oo Ga-ga-ooh-la-la… laakiin dhammaan Top 40 hits ayaa gabadhayda ka dhigaya inay raadiyaha kor u qaaddo oo ay bilawdo heesaha. Ma caawin karo laakiin waan heesaa.
Kaliya Dance-ga ayaa u muuqda inay tahay hees ku saabsan in laga yaabo inay wax yar talooyin tahay laakiin si fudud ugu booddo dabaqa qoob-ka-ciyaarka oo iska sii deyso Just Dance!
Toddobaadkan waxaan joogaa New Orleans anigoo sameynaya hadal orod ah (aniga + sprint = qosol leh) Webtrends Wadahadal shir. Farriinteyda ugu horeysa ee shirkadaha raba inay dhisaan ganacsigooda ee ku saabsan qorista qorista ayaa ah inay banaanka joogaan. Waxay u baahan yihiin inay ka soo baxaan tayada fariintooda. Waxay u baahan yihiin inay banaanka ka soo baxaan iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Waxay u baahan yihiin inay banaanka hore ku soo baxaan matoorada wax raadinta. Sidee? Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay iska indha tiraan dhammaan waxyaabaha ku mashquulinaya iyo Just Dance markay tahay Baraha Bulshada. Istaraatiijiyad hel, dabaqa ka soo bax oo fuliya.
Kuma helaysid iftiinka iftiinka adigoo ah ubax-sameeye.
Kahor intaanan ka ambabixin garoonka diyaaradaha ee Indianapolis, waxaan e-may ka helay saaxiibkey oo aan isbuucyo ka hor la kulmay. Waxaa loogu yeeray Aqalka Cad si uu ula kulmo Madaxweynaha sababtoo ah khudbadaha dhiirigelinta leh ee uu ka jeedinayo bulshada madow. Sheekadiisa waa mid layaab leh fariintiisuna ma ahan waxaad u maleyn karto… wuxuu yiri 2010 waa dhamaadka cudurdaarka dadka si ay u gaaraan weynaantooda. Mar dambe eedda looma saari karo dadka kale, qof kasta oo keligiis ah waa inuu si qoto dheer u qodo oo uu ku noolaadaa kartidiisa Eebbe siiyay. Taasi waa fariin aan caadi aheyn oo awood u leh qof walba… maahan kaliya dadka laga tirada badan yahay ee wadankan.
Xaqiiqdu waxay tahay inay wax badan ka fudud tahay in nolosha la maro iyada oo la fulinayo wixii ay noo sheegeen waalidiinteen, macallimiinteenna, dowladdeenna hard aad u shaqee, iibso waxyaabo aan fiicnayn, dhis 401k Diyaaradda markii aan raacayay, waan cunay Linchpin: Adigu Ma Lihi Karaa?. Hadda oo dadku shaqo la’aan yihiin, 401-koodii ay dhammaadeen, waxay lumiyeen caqligoodii… waa iska caddahay in xaaladdu hadda uun tahay beentii ugu weyneyd taariikhda Mareykanka.
Seth Godin ayaa qoray,
Sida kaliya ee aad kuheli karto waxa kuu qalma waa inaad istaagto, inaad sameyso foosha shucuurta, inaad u aragto mid aan laga maarmi karin, iyo inaad soo saarto is dhexgal ay ururada iyo dadku aad u daneeyaan.
Jooji ku ciyaarista qawaaniinta isla markaana la jaanqaadaya tirada aan dhammaadka lahayn ee cogs kale (muddada Seth Godin) ee keenay dalkan iyo dhammaan kartida halkaa u jirta jilbaha iyo dhaqaalaheena hakad. Raadi nalkaaga, ha dhagaysan naysayers… dabadaada ka soo saar dabaqa qoob ka ciyaarka oo rux.
Waxaan rajeynayaa in heestaan ​​ay madaxaaga ku dhegi doonto now